Imizi-mveliso yokulima, ababoneleli - iChina ilima abavelisi
Idiski yokulima i-3 itrekta yokubopha
Izixhobo zefama idiski yokulima inyuswe ngokupheleleyo ngetrektara, ngexesha lokusebenza, ii-disc ngokujikeleza kwawo ukuguqula umhlaba, ngakumbi, ilungele ukusebenza ebaleni ngengca, iindiza kunye neziqu zezityalo okanye zezityalo, ukumelana nomhlaba omkhulu kunye amatye kunye nezitena, njl njl. Kulungile xa usika ingca nengca, ngaphandle kokumiswa yingca, ngumhlaba okanye ngamatye, njl. Uthotho olu-1; Uthotho lwe1LYX; 1LY (SX) uthotho. Izixhobo zefama idiski yokulima inyuswe ngokupheleleyo ngetrektara, ngexesha lokusebenza, iidiski ngokujikeleza kwayo ukujika umhlaba, ngakumbi, ilungele ukusebenza ebaleni ngengca, iindiza kunye neziqu zezityalo okanye zezityalo , ukuxhathisa komhlaba omkhulu kunye namatye amaninzi kunye nebrickbat, njl. Kulungile ukusika ingca nengca, ngaphandle kokumiswa yingca, ngumhlaba okanye ngamatye, njl.
Umsele owodwa wokuLima
Eli licekeceke lecala elinye lecala le-8 ~ 20hp yokuhamba kwetrektara, i-12hp ~ 20hp itrektara encinci.
Ukubonelela ngeFektri yokubonelela ngeFektri yeTrektara yaseFama
Idiski yokulima inyuswe ngokupheleleyo ngetrektara yokuhamba kunye netrektara encinci, ngexesha lokusebenza, ilungele ukusebenza ebaleni ngengca, umququ kunye neziqu zezityalo okanye zezityalo, ukumelana nomhlaba omkhulu kunye namatye amaninzi kunye nezitena, njl njl. Kulungile xa usika ingca kunye nengca kwaye ungamiswanga yingca, ngumhlaba okanye ngamatye, njl.njl. Iyasebenza emsebenzini ikumgangatho olungileyo ngexesha lokusebenza. Kulula ukulungelelanisa kwaye womelele.
Ikhuba luhlobo lwesixhobo sezolimo sokulima. Yikhuba elixhonyiweyo elipheleleyo, elenziwe ngentsimbi eshinyeneyo ekupheleni kwentsika, edla ngokubotshwa kwiqela lemfuyo okanye iimoto eziyitsalayo, kwaye ziqhutywa ngamandla abantu. Isetyenziselwa ukwahlula umhlaba kunye nokwenza imijelo yokuhlwayela.
Isakhiwo sokukhanya, ukusebenza okulula, ukusebenza kakuhle komsebenzi
Amahlathi, ukufuya izilwanyana, i-aquaculture, ezolimo
Imiqathango Intlawulo: T / T, L / C, Card Card